आज फेरी घट्यो सुनको मूल्य , प्रतितोला कति ? – Ramailo Sandesh
आज फेरी घट्यो सुनको मूल्य , प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार लगातार २ दिन बढेको सुनको भाउ आज तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको हो। विहीबार सुनको मूल्य ८७ हजार २०० रुपैयाँ पुगे थियो ।
यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ८६ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८६ हजार २५० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ८७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८६ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
गत बुधबार तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ सोमबार र मंगलबार भने स्थिर रहेको थियो। आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा १५ रुपैयाँ घटेर १ हजार २७५ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार तोलामा २० रुपैयाँ बढेर चाँदी १ हजार २९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
रिहानाले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा किनिन् भव्य महल, हेर्नुहोस् भित्रका तस्वीरहरु
यो बर्षको पहिलो चन्द्रग्रहण यस्तो छ सुतककालको मिति र समय र असर